UMarechal nokuza kwakhe okuphakade kuza ... | Izincwadi Zamanje
UBelen | | Abalobi, I-Novela, Izinkondlo
Umbhali ongakaze ayeke noma ongeke ayeke ukuzithanda ngami U-Leopoldo Marechal. Abaningi kumele bayazi, njengoba abaningi kufanele banganaki ukuthi imayelana nani.
Umbhali Wase-Argentina, Wazalwa ngoJuni 11, 1900, futhi washona ngoJuni 26, 1970, wayengomunye wababhali abakhulu lesi sizwe esisishiyile.
Omunye wemisebenzi yakhe ebaluleke kakhulu kwaba "U-Adam Buenosayres", Inoveli yakhe yokuqala eqala i-trilogy ayezoyiqedela kamuva ngo"Idili laseSevero Arcángelo", futhi"IMegaphone noma iMpi”. Ngaphandle kokubhala amanoveli, uzinikele kakhulu eshashalazini (ngemisebenzi efana nokuthi “Don Juan"Futhi"Antigone Velez”), Futhi wakhula waba yimbongi nomxoxi wezindaba omkhulu.
Angikuboni kufanelekile ukucwaninga nge-biography yombhali lapha, yize emininingwaneni emincane engicabanga ukuthi iyathandeka ukumazi kangcono kakhulu, futhi maqondana nomlando, kanye nomongo wokuqhakaza lapho abangane bakhe bebaningi "enkulu kakhulu".
Umbhali ubebaluleke kakhulu umlandeli wePeronism, ngenkathi yathuthukiswa, nangemva kwayo, e-Argentina. Ngenxa yezingxabano zepolitiki ezavezwa yile mibono kuwo wonke umlando, imisebenzi kaMarechal yehliselwa ekukhohlelweni ngenkani. "U-Adam Buenosayres"Ayizange yamukelwe kabanzi ngesikhathi ishicilelwa, ngo-1948, yize kwaba njalo, futhi ngenhlanhla, ngabalobi bakamuva ezweni.
ULeopoldo wazalelwa edolobheni laseBuenos Aires, yize ahamba phakathi nezwe amahlandla amaningi nomalume bakhe, lapho efika khona bambiza ngo “buenosayres” ngenxa yemvelaphi yakhe. Lokhu yilokho okwaveza igama le-protagonist yencwadi yakhe, u-Adam, okuthi ngandlela thile kungathiwa unguye uqobo, futhi futhi kungenzeka ukuthi uthole ukuqondana kobunikazi okumangazayo kumbuthano wabangane be-protagonist, Abangane bakaMarechal empeleni: Xul Solar, Borges noJacobo Fijman phakathi kwabanye.
Izinga eliphakeme lobuzwe obuboniswa ngumsebenzi likwenza kube yinsika yezincwadi zase-Argentina, kanye ne "UMartin Fierro","UDon Segundo Sombra", futhi"Ubuso".
Mayelana ne- "yakho"U-Adam Buenosayres", Leopoldo wabhala:"Lapho ngibhala u-Adán Buenosayres wami angizange ngiqonde ukuthi ngingaphuma kanjani ezinkondlweni. Kusukela ekuqaleni kakhulu, futhi ngokususelwa ku-Aristotle's Poetics, bekubonakala kimi ukuthi zonke izinhlobo zemibhalo bekufanele futhi kube yizinhlobo zezinkondlo, zombili ziyindumezulu, ziyadlala futhi zinezingoma. Kimi, ukuhlukaniswa kwe-Aristotelian kwakusasebenza, futhi uma inkambo yamakhulu eminyaka yayiqedile izinhlobo ezithile zemibhalo, ibingakwenzanga lokho ngaphandle kokudala 'izisusa' zazo. Kungaleso sikhathi lapho kwabonakala kimi ukuthi inoveli, uhlobo lwesimanjemanje, ibingenakuba yini enye ngaphandle 'kokungena esikhundleni esisemthethweni' se-epic yasendulo. Ngale nhloso, ngabhala u-Adán Buenosayres futhi ngayivumelanisa nezindinganiso u-Aristotle azinikeze uhlobo oludumile.»
Le ncwadi ikhombisa isikhathi sokufuduka okukhulu izwe elahlangabezana naso ekuqaleni kwekhulu leminyaka, lapho yonke imindeni yaqhamuka eSpain, e-Italy, eFrance nakwamanye amazwe ase-Europe, beyofuna umsebenzi, ngasikhathi sinye bebalekela ukushushiswa kwezepolitiki bahlupheka ezizweni zabo. Isethembiso somcebo ababedonselwa ngawo ezweni sasiseyisithembiso, futhi amaphakethe abo abukeka engenalutho njengoba kwenzeka eminyakeni eyedlule, yingakho begcwele ezindaweni ezithile zedolobha laseBuenos Aires. Lesi sigaba sabalingiswa yilokho uMarechal akuthathayo ukuthuthukisa umongo ahlala kuwo u-Adán.
Okuthokozisayo ngemibhalo yalo mbhali, futhi ikakhulukazi ngale noveli engikhuluma ngayo, ngumsebenzi wokujola ojulile, kanye nokuzivocavoca kwefilosofi nokwakheka kwezinto abalingiswa abathuthukisa ngakho ebudlelwaneni babo. Ngokuqondile, ngalokhu, bekungeke kube ngumngane ka-Adam, isazi sefilosofi uSamuel Tesler, umlingiswa we-apocrypha onemiphumela yakhe njengomlingisi wamaqiniso amaningi ahlambalazayo njalo eyisizathu sokuhleka okumangalisayo. Futhi ngasikhathi sinye, njenganoma isiphi isiqu esizibophezela ekubeni ngumuntu, esikufanele ukudilizwa, isici esiyisisekelo, esizalelwe thina sonke, asinakunakwa, okuwuthando. Futhi njengoba u-Adam naye eyingxenye yethu, wayethanda. Ukunikezela amanothi akhe awathandayo ahlala njalo awaphethe encwadini yakhe enombhalo oluhlaza okwesibhakabhaka athi, ngasekupheleni kwenoveli, umnika yona, ehlangabezana nemibuzo edlula ngisho nesidingo uqobo lwaso.
Futhi njengoba yonke le ncwadi iwukuvakasha kwayo, yize kunjalo nangezinye eziningi, uMarechal akakwazanga ukuzikhokhela ukuzohlonipha uDante Alighieri, azenzele isihogo sakhe, noma kunalokho, "isihogo sikaSchultze", umngani wezinkanyezi ka-Adam . Ngakho-ke, sihudulwa isahluko nesahluko, kusihogo ngasinye esakha esikhulu kunazo zonke, ngasinye sazo siyisibonelo esihle kakhulu seBuenos Aires esigwetshwe ngamalangabi amnandi kakhulu omhlaba.
Lokhu kusewuhambo lwento esivele yaziwa, noma mhlawumbe imbangela yokumangala kwabanye (ngiyethemba). Mhlawumbe izaba zokuphinda uyifunde futhi, noma ukuqala ukuyifunda, ngoba akuyona ingxenye yomlando wezincwadi wase-Argentina kuphela, kodwa futhi iyingxenye yamaculo ahamba phambili emlandweni.
Umbhalo wezincwadi kaLeopoldo Marechal:
"Odes for Indoda nowesifazane", 1929
"ILabyrinth yothando", 1936
"Izinkondlo Ezinhlanu ZaseNingizimu", 1937
"Izingoma eziya kuSophia", 1940
"Ingoma yeSan Martín", ngo-1950
"Inkondlo Yerobhothi", 1966
"U-Antígona Vélez", ngo-1950
"UDon Juan", 1956
"Adán Buenosayres", ngo-1948
"Idili laseSevero Arcángelo", ngo-1965
"Megaphone noma iMpi", 1970
Izixhumanisi ezinconyiwe: http://www.elortiba.org/marechal.html; www.marechal.org.ar
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UMarechal nokuza kwakhe kwaphakade kuza ...
UMarechal noBorges babengabangani?
"Ukuthanda ngemuva kokukuthanda": ukufunda okulula, ukucabangisisa okujulile